XOG XASAASI: Maxaa ka jira in mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya la hor-geynayo BF Soomaaliya? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka jira in mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya...
XOG XASAASI: Maxaa ka jira in mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya la hor-geynayo BF Soomaaliya?
Muqdisho (Halqaran.com) – Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay Mooshin ka dhan ah Ciidamada Kenya inuu horyaallo Baarlamaanka Soomaaliya, kulamada ugu soo horeeyana looga hadli doono.
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka hadasho daan daansi iyo xad gudub uu sheegay inay Kenya ku heyso Soomaaliya.
“Xukuumadda waa inay ka hadashaa daan daansiga dowladda Kenya ay wado iyo sidoo kale sheegashada dhulkeena, arrinta badda waa mid maxkamadda taallo, Mooshin baan diyaarinay Baarlamaanka ayuuna horyaalla.”Ayuu yiri Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa xilligaan waxaa ka dhaxeeya Khilaaf adag oo dhanka Siyaasadda ah iyo arrinta badda ku saabsan, xilli shalay wafdi ka socda dowladda Kenya ay ka qayb galeen xafladii caleemo saarka Madaxweynaha Jubbaland.
baarlamaanka la horgeynayo
mooshin ka dhan ah